ဘဝချက်ပြုတ်နည်းများရှင်သန် - အကောင်းဆုံး Freeze အခြောက်စားနပ်ရိက္ခာကြီးထွားလာ
💚 RUVI ကျန်းမာသောသောက်စရာများ
a Comment ချန်ထား	/ အကောင်းဆုံးအေးခဲခြောက်အစားအစာ, အေးခဲခြောက်အစားအစာရှင်သန် / အားဖြင့် အဒ်မင်
ကျန်းမာသောအစားအစာချက်ပြုတ်နည်းများကိုအလျင်အမြန်ရှာဖွေနေသူများသည်ချက်ပြုတ်နိုင်သောချက်ပြုတ်နည်းများကိုချက်ချင်းရှာတွေ့လိမ့်မည်. ဤရွေ့ကားအမြန်ချက်ပြုတ်နည်းများသင်ပုံမှန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ကြောင်းဟင်းလျာများဖန်တီးကူညီပေးနိုင်ပါသည်. သိသိသာသာ, သင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှာဖွေစူးစမ်း start သည့်အခါ, သငျသညျဆက်ဆက်ညစာအဘို့များစွာသောအကြီးအအတွေးအခေါ်များကိုတွေ့လိမ့်မည်.
သငျသညျစွန့်စားဖြစ်သို့မဟုတ်ညစာအတွက်အသစ်သောစိတ်ကူးများကိုရှာဖွေချင်တယ်ဆိုရင်, ကျန်းမာသန်စွမ်းသောမြန်ဆန်သည့်ချက်ပြုတ်နည်းများတွင်ပါဝင်သောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအာရုံစိုက်ရန်ကောင်းသည်. နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ပါဝင်ပစ္စည်းများအများစုပျော်မွေ့အဖြစ်, သင်ကျိန်းသေကျန်းမာချက်ပြုတ်နည်းများကိုခံစားပါလိမ့်မယ်.
သင်သည်တစ်နေ့တာအလုပ်ပြီးပြီးနောက်အိမ်သို့ပြန်လာပြီးရိုးရှင်းသောအရာတစ်ခုကိုပြင်ဆင်လိုသည်? သင်ကရေခဲသေတ္တာထဲကိုကြည့်လိုက်ပြီးလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်ပုံရသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည်အရသာမရှိသောအေးခဲသည့်ညစာစားပွဲဖြစ်သည်, ရှင်သန်နေသောဘဝ၌ရရှိနိုင်သည့်ချက်ပြုတ်နည်းများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်.
သင့်အားကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအားလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုခွင့်ပြုသောကျန်းမာသောအစားအစာချက်ပြုတ်နည်းများကိုရှာဖွေပါ. ရလဒ်အနေဖြင့်, အမြန်ချက်ပြုတ်နည်းများမှအရသာရှိသည့်ဟင်းလျာများကိုသင်ဖန်တီးနိုင်သည်. အခုမှစပြီး, ညတိုင်းညစာအတွက်အကြံဥာဏ်ကောင်းများမရသည့်အကြောင်းပြချက်များမရှိတော့ပါ.
– Tortilla ဟင်းချို
ကြက်သား tortilla ဟင်းချိုစာရွက်အတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများ:
8 ဇွန်း canola ရေနံ;5မှပြောင်းဖူး tortillas 10 “12”; 1 ကြက်သွန်နီ;6ကြက်သွန်ဖြူလေးညှင်းပွင့်; 1 နံနံတစ်ချောင်း;2ဘူးခွံများ, 14.5 oz diced ခရမ်းချဉ်သီး; 8 ခွက်ကြက်သားဟင်းရည်; 14 အောင်စစည်သွပ်ဘူးသို့မဟုတ်အေးခဲနေသောပြောင်းဖူး; 3/4 – 1 1/2 ဇွန်းမြေပြင်ဇီ; 1/2 – 1 ဇွန်းငရုတ်သီးမှုန့်;4ပင်လယ်အော်အရွက်;4အသားမရှိအရေမရှိသောကြက်သားရင်သားသို့မဟုတ်ပေါင်ကိုကြိုးစားပါ; 1/2 လက်ဖက်ရည်ဇွန်း cayenne ငရုတ်ကောင်း; 1 သံပုရာဖျော်ရည်
– ကြက်သား Tortilla ဟင်းချိုစာရွက်နည်းလမ်းများ
ဖြတ်ယူပါ2သို့ tortillas သို့ 1/4 လက်မအရွယ် strips တွေနှင့်ကြော်3canola ရေနံဇွန်း. မင်းသူတို့ကိုရွှေရောင်အညိုရောင်ဖြစ်စေချင်တယ်, သို့ရာတွင်၊, ချက်ချင်းပဲချက်ပြုတ်ကြတယ်. သင့်ရဲ့ဒယ်အိုးအရွယ်အစားပေါ်မူတည်, သငျသညျတစ်ကြိမ်မှာအများအပြားချက်ပြုတ်ဖို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်.
ဒယ်အိုးထဲက strips တွေဖယ်ရှားပြီးသူတို့ကိုစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်စက္ကူလက်သုတ်ပုဝါတွေဆီလွှဲပြောင်းပါ.
နောက်ထပ်တစ်မိနစ်သို့မဟုတ်နှစ်မိနစ်ခန့်အတွက်ကြက်သွန်ဖြူနှင့်sautéထည့်ပါ. ကျန်ရှိသောမျက်ရည်များ3ပြောင်းဖူး tortillas သေးငယ်တဲ့အပိုင်းပိုင်းသို့ဒယ်အိုးထည့်ပါ.
နံနံပင်ထည့်ပါ, နှိုးဆော်နှင့်အခြားတစ်မိနစ်ချက်ပြုတ်. ခရမ်းချဉ်သီးများကိုကြက်သားရည်နှင့်ဟင်းရည်နှင့်ထည့်ပါ, ဇီ, ငရုတ်သီးမှုန့်နှင့်ပင်လယ်အော်အရွက်များနှင့်ဆူအောင်တည်ဆောင်ခဲ့ရမည်.
ဆူအောင်အပူကိုလျှော့ချပါ; ပြောင်းဖူးထည့်ပါ, ကြက်သားရင်သားနှင့် cayenne ငရုတ်ကောင်း. ကြက်သားရင်သားများကိုချက်ပြုတ်ပါ 15 ရန် 20 သူတို့ချက်ပြုတ်သည်အထိမိနစ်.
ကြက်သားရင်သားကိုဖယ်ရှားပြီးအေးမြပါစေ. ဒီနေရာမှာဟင်းချိုကိုရပ်တန့်. ကြက်သားရင်သားအအေးကြသောအခါ, သူတို့ကိုလက်များဖြင့်ဖျက်စီးပြီးဒယ်အိုးသို့ပြန်ပို့ပါ.
သံပုရာဖျော်ရည်ကိုထည့်ပြီးစပ်သောအရသာကိုစမ်းပါ. သင်ပိုနှစ်သက်လျှင်, နံ့သာမျိုးများကိုထပ်ထည့်ပါ. ကြော်ထားသော tortilla အချပ်များနှင့်အတူနွေးပါ.
ကျွန်တော့်အစ်မကများသောအားဖြင့်ဒီကြက်ကြော် tortilla ကိုကြော်ထားသော tortillas နှင့်အတူလေ့ကျင့်သည်, diced ထောပတ်သီး, ပြီးလျှင် cheddar နှင့်ချဉ်သောမုန့်. ချဉ်သောမုန့်သည်နံ့သာမျိုးအချို့ကိုပျော့ပျောင်းစေပြီးဟင်းချိုကိုအလွန်ကောင်းမွန်သောအသွင်အပြင်ကိုပေးခဲ့သည်. ဒီဟင်းချိုဟာအစာပါ.
သင့်ပေါင်မုန့်ကိုပေါင်မုန့်တလုံးထဲထည့်ပါ. ပဲစေ့တစ်ဘူးကိုထည့်ပါ, အန်စာတုံးခရမ်းချဉ်သီးတစ်ဘူး, ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်သေးသေးလေးနဲ့ငရုတ်ကောင်းအနံ့အရသာရှိတဲ့ဒီထမင်းတစ်ပင်. သင်က chic စေလိုလျှင်, ဒါ့အပြင်အန်စာတုံးငရုတ်ကောင်းထည့်ပါ. တစ်ဆူပွက်စေခြင်းငှါငါနှင့်ပတ်သက်။ ချက်ပြုတ် 20 မိနစ်များ (သို့မဟုတ်သင်စုပ်ယူရန်လိုအပ်သင်၏အစာအိမ်မြည်သည်အထိ). ဒီမှာ. မင်းမှာအရသာရှိတဲ့ငရုတ်သီးမှုန့်ခတ်ရှိတယ်.
ပထမဦးဆုံး, သင်၏ခေါက်ဆွဲများကိုပွက်ပွက်ဆူနေသောရေတွင်ထားပါ. ဒါဟာထာဝရယူနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်ကသင့်ရဲ့ခေါက်ဆွဲကိုအရင်ကျသင့်တယ်. အဆိုပါငရုတ်သီးလိုပဲ, သင်အလတ်စားမှကြီးမားသောပြီနောက်ဟင်း၌သင်၏အသားပေါင်အညိုရောင်. သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောခေါက်ဆွဲဆော့စ်ကိုအိုးထဲသို့လောင်းပါ. ထိုခေါက်ဆွဲများကို al dente ချက်ပြုတ်ရန်လိုအပ် သ၍ မွှေပေးပါ (ဒါကနည်းနည်းကြာကြာများအတွက်ဖန်စီစကားပြောဆိုမှုပါပဲ – ဒါကအနည်းငယ်အခိုငျအမာပါပဲ). ခေါက်ဆွဲတစ်ချောင်းကို ယူ၍ အသားဆော့စ်နှင့်ဖုံးအုပ်ပါ.
ဒီစာရွက်အနည်းငယ်အဆင့်မြင့်သည်, သို့သော်၎င်းသည်မြန်ဆန်လွယ်ကူသောဟင်းလျာများအမျိုးအစားအောက်တွင်ကျရောက်သည်. ပထမ, ပြောင်းဖူးပေါင်မုန့်အနည်းငယ်ဘူးခွံများယူပြီး cornbread မုန့်စိမ်းအောင်၏လမ်းညွှန်များကိုလိုက်နာပါ (သငျသညျဖြစ်ကောင်းဥနှင့်နို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်). မုန့်စိမ်းတစ်ဝက်ကိုမုန့်ဖုတ်စာရွက်ထဲသို့သွန်းလောင်းပါ; အညိုရောင်မြေပြင်အမဲသား၏အလွှာ, ညှစ်ပြောင်းဖူးနှင့်ပြီးလျှင်ဒိန်ခဲတစ်လုပ်နိုင်တဲ့ (cheddar jack ကိုကြိုက်ပါတယ်).
ထိုအရာ၏ထိပ်တွင်, အဆိုပါ cornbread မုန့်စိမ်း၏ကျန်အတူ, ထိပ်ရွှေသည်အထိချက်ပြုတ်. ဒါဟာထူးဆန်းနေတယ်, ဒါပေမယ့်surelyကန်အမှန်သင့်ရဲ့မီးဖိုချောင်ထဲမှာခဲဖွယ်စားဖွယ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်.
1 ပိန်သောမြေပြင်အမဲသား၏ကီလိုဂရမ်; 1 ကြမ်းကြက်သွန်နီကုန်တယ် Tsp; 1/2 ကြမ်းကုန်တယ်အစိမ်းငရုတ်ကောင်း Tsp;2ketchup ၏ဇွန်း; 1/4 ဆား၏ ts; 1/2 မုန်ညင်းစေ့; 1 1/2 ထမင်းချက်ပါ; 1 Tsp နို့; 1 မှိုမုန့်၏လုပ်နိုင်သည်; 1 1/2 cated cheddar ဒိန်ခဲ; 1 ဇွန်း worcestershire ငံပြာရည်;2ကြမ်းပြောင်းဖူးအလွှာ tbsp;3အရည်ကျိုထောပတ်၏ဇွန်း.
– အသားSauté, အသားရွှေအညိုရောင်သည်အထိကြီးမားသော skillet ၌ကြက်သွန်နီနှင့်ငရုတ်ကောင်း; အဆီစစ်ထုတ်.
– ketchup ကိုရောမွှေပါ, ဆားနှင့်သွေ့ခြောက်သောမုန်ညင်း.
– အသားအရောအနှောကို ၂- လီတာပတ်ပတ်လည် casserole ပန်းကန်အဖြစ်သို့ပြောင်းပါ; ထိပ်ပေါ်မှာဆန်ဖြန့်.
– ဒိန်ခဲနဲ့ Worcestershire ဆော့စ်ကိုရောမွှေပါ.
– ကြေမွပြောင်းဖူးအလွှာနှင့်ထောပတ်ကိုရောမွှေပါ; ဒယ်အိုးကျော်အညီအမျှဖြန်း.
– မှာ preheated မီးဖို၌ဖုတ်ရမည် 375 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် 35 ရန် 40 မိနစ်သို့မဟုတ်ပူပြင်းခြင်းနှင့်ပူဖောင်းသည်အထိ.
မကြာမှီလာမည်, အဘို့အချက်ပြုတ်နည်းများ: Jim ရဲ့ tortilla ဟင်းချိုစာရွက်
သင်တို့သည်လည်းငါတို့စျေးဝယ်နိုင်ပါတယ် ဤနေရာတွင်ကျန်းမာသောအာဟာရရှိသောအေးခဲစေသောအခြောက်များ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ပင်မစာမျက်နှာသို့ပြန်သွားကာပိုမိုလေ့လာသင်ယူခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည် အေးခဲနေသောအစာအာဟာရများကိုရှင်သန်စေပါ ဒါမှမဟုတ်လူတွေကိုဘယ်လိုကူညီရမယ်၊ ဘဝအတိုင်ပင်ခံရှင်သန်.
ကျနော်တို့အမြဲတမ်းမေးခွန်းတစ်ခု – အတိုင်ပင်ခံမည်မျှရှင်သန်ကြဘူး?
← ရှေ့ ပို့စ်တင်
နောက်တစ်ခု ပို့စ်တင် →
နို့ထွက်အအေးခဲ - နို့, ဒိန်ခဲ, ဒိန်ချဥ်
အသားများကိုအေးခဲအောင်လုပ်ပါ & ပရိုတိန်း
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရရှိသော Ruvi သောက်စရာများ
စားနပ်ရိက္ခာ Images ကိုရှင်သန်
ဘဝရှင်သန်မှုအကြားခြားနားချက်, စျေးကွက်ရှင်သန်, နှင့် le-vel ရှင်သန်
သင်၏ Thrive Life အသီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုစားရန်နည်းလမ်းများ
Facebook က တွစ်တာ Youtube ကို Pinterest wordpress
starter Menu ကိုနှင့်အစာရှောင်ခြင်း Track အစီအစဉ်